admin · Novambra 2009 · Global Voices teny Malagasy
admin · Novambra, 2009
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Novambra, 2009
Ejipta28 Novambra 2009
Filipina: Dokambarotra kandidà ho filoham-pirenena amin'ny fahitalavitra
Filipina24 Novambra 2009
Hisy fifidianana filoham-pirenena any Filipina amin'ny taona ho avy. Efa nanomboka ny fotoan'ny fifidianana amin'ny famenoana ireo antontan- taratasy filatsahana any amin'ireo biraom-panjakana manerana ny firenena. Ho fanairana sy fampahafantarana ny mpifidy mikasika ny firotsahana ho fidiana manao fandaharana sy mandoa ny vola mifandraika amin'izany ireo mpifaninana ho filoham-pirenena. Sarimihetsika...
Repoblika Dominikana: Mitohy ny olana herinaratra
Amerika Latina21 Novambra 2009
Vao tsy ampy 3 volana no nandraisany ny asa amin'ny maha filoha lefitry ny CDEEE (Dominican Corporation of State Electric Companies [es]) dia tsy maintsy mitady fanampiana any ivelan'ny fireneny i Celso Marranzini hamahana ny olana herinaratra any an-toerana, izay mihasarotra hatrany. Nisy delegasiona notarihan'i Marranzini nankany Korea Atsimo hitady...
Angola17 Novambra 2009